သင်သည်အခြားသူများကဲ့သို့သင်ကိုယ်တိုင်ကဲ့သို့ကောင်းသောသူဖြစ်ရန်သင်ယူသောအခါဘဝသည်လှပလာသည်။ - အမည်မသိ - ကိုးကား Pedia
မိမိကိုယ်ကိုချစ်ခြင်းသည်အရေးကြီးသောအရာဖြစ်သည် ဒါပေမယ့်ဘ ၀ မှာမတူကွဲပြားတဲ့ဆက်နွယ်မှုတွေကိုထိန်းသိမ်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့မကြာခဏသတိမထားမိကြပါ။ ထိုဆက်ဆံရေးကိုထိန်းသိမ်းခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်ဟုသင်ခံစားရသည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းတို့သည်သင်ချစ်မြတ်နိုးပြီးဂရုစိုက်ဆုံးမမှုအများဆုံးသောသူများဖြစ်သည်။
သို့သော်သင်ကိုယ်တိုင်သည်အခြားသူများကိုဂရုစိုက်သကဲ့သို့သင်ကိုယ်တိုင်ဂရုစိုက်ရန်လိုအပ်သည်ကိုသင်နားလည်သင့်သည်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်သာလျှင်သုံးရန်အချိန်ကိုယူပါ။ သင်အမှန်တကယ်ချစ်မြတ်နိုးသည့်အရာနှင့်ဆက်သွယ်ပြီး၎င်းနှင့်ဆက်ဆံပါ။ မိမိကိုယ်ကိုကြီးထွားရန်နှင့်မိမိကိုယ်ကိုသိကျွမ်းရန်နေရာပေးပါ။
သင်ကိုယ်တိုင်ကိုချစ်မှသာလျှင်သင်သည်အခြားသူများကိုလုံလောက်စွာချစ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိကိုယ်ကိုသာ ဦး စားပေးသည်ဟုမဆိုလိုပါ။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည် ဦး စားပေးစာရင်းတွင်လည်းပါဝင်သည်။ ၎င်းသည်အလိုလိုသိသွားနိုင်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘဝ၏စည်ကားမှုတွင် ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်လိုအပ်ချက်များကို ဦး စားပေးရန်မကြာခဏမေ့သွားတတ်သည်။
သင်အမှန်တကယ်ပျော်ရွှင်သောအခါဘဝသည်လှပလာလိမ့်မည်။ မင်းရဲ့ပျော်ရွှင်တဲ့နေရာကိုတွေ့လိမ့်မယ်။ သင်ဘယ်တော့မှမသိသောစိတ်အားထက်သန်မှုအကြောင်းကိုလည်းသင်ရှာဖွေပေမည်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ချစ်ခြင်းဟူသည်သင်၏စစ်မှန်သောမိမိကိုယ်ကိုထိတွေ့ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။
ထို့ကြောင့်အခြားသူများ၏မျက်မှောက်၌ကောင်းသောသူတစ် ဦး ဖြစ်လာရန်သို့မဟုတ်ချစ်မြတ်နိုးရသူများကိုဂရုစိုက်ရန်ကြိုးစားမှု၌မိမိကိုယ်ကိုမမေ့ရန်အရေးကြီးသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဦး စားပေးနှင့်အခြားသူများအပေါ်လည်းပျိုးထောင်ပါ လှပသောဘဝနေထိုင်ရန်အတူတကွကြီးပွားခြင်း.
လှပသော Inspirational ကိုးကား
ကောင်းသောနံနက် Motivational ကိုးကား
အဆင်ပြေသောအရာများကိုကျော်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိန်ခေါ်ရန်အမြဲသတိရပါ။ - အမည်မသိ
စဉ်းစားတွေးတောခြင်းကစိတ်ကိုပျက်ပြားစေပြီးပျော်ရွှင်မှုကိုဖျက်ဆီးပစ်သည်။ - အမည်မသိ
တန်ဖိုးထားခံရသူသည်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းအမြဲလုပ်သည်။ - အမည်မသိ
တန်ဖိုးထားခံရသည်ဟုခံစားရသူတစ် ဦး သည်သူမျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းလုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ချေ! ဟုတ်တယ်၊
အချိန်ကိုက်အရာအားလုံးပါပဲ။ အကယ်၍ ၎င်းသည်ဖြစ်ပျက်ရန်ရည်ရွယ်ထားလျှင်မှန်ကန်သောအကြောင်းပြချက်များအတွက်အချိန်တန်ပါလိမ့်မည်။ - အမည်မသိ
အချိန်ကိုက်အရာအားလုံးပါပဲ။ အကယ်၍ ၎င်းသည်ဖြစ်ပျက်ရန်ရည်ရွယ်ထားလျှင်မှန်ကန်သောအကြောင်းပြချက်များအတွက်အချိန်တန်ပါလိမ့်မည်။ …